Yaa naga mid ah oo uusan rabin inuu ahaado qof faraxsan hadaba raac todobadan tallaabo… – Hagaag.com
Yaa naga mid ah oo uusan rabin inuu ahaado qof faraxsan hadaba raac todobadan tallaabo…
Posted on 10 Luulyo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Yaa naga mid ah oo uusan rabin in uu ahaado qof faraxsan, Arrinatni ma aha mid adag gaaristeeda haddii aan bedelno habka aan u fekerno iyo jawaabta an ka bixineyno markii wax nagu dhacaan dhinaca nolosha.
Waxaan wax badan wax ka qoray dadka bartay cilmi nafsiga farxada iyo sida loo dareemo, waxaa u soo baxday ku dhaqanka sida naxariista, mahadnaqa iyo fikirka wanaagsan iyo rajada kuwaasi kuligooda keliya faa’ido uma aha caafimaadkaada iyo farxadaada, laakin sidoo kale waxay faa’ido u yihiin shaqadaada.
Haddii aan rabno farxad todobadan arrimood raac:
Subax kasta, muddo 21 maalmood, waxaad diiwaan gelisaa seddex waxtar oo aad sameysay ama la kulantay maalin ka hor. Sidan waxaad naftaada ku tababareysaa si diirada lo saaro waxyaabaha wanaagsan, taas oo saameyn ku yeelan doonta heerka aad wax u rajeyneyso.
Lacag ku tijaabi sidii qof ula shirkoobi laheyd:
Cilmi-baaristu ayaa waxay muujisay in kharaj lagu bixiyo dadka kale ay tahay farxad naftaada, waxay ka fiican tahy iibsiga waxaad jeceshahay keligaa.
3 – Ku ekow waqtiga xaadirka ah:
Waxaa laga yaabaa waqtiyadii ku soo dhaafay in ay ka buuxaan talaabooyin dhib iyo xanuun lahaa , hadaba nafsadaada ha u afduubin wixii hore, sidoo kale ka welwelka faraha badan ee mustaqbalka wax ma faa’ideeyo, labadaasi arrimooda waxay kaa hor istaagayaan in aad ku raaxeysatid waqtiga xaadirka ah, mar walba horey u soco.
Farxada ayaa ku timaaddaa xidhiidh fiican oo la yeelatid qoyska, asxaabta iyo kuwa aad isbarateen ee cusub, xirxirnaanta waxay kugu sababeysaa murugo iyo maqnaanshaha farxad, ahaw bulshaawi.
5 – Ahaw qof Naxariista:
Dareemidda dadka kale iyo caawinta kuwa u baahan waxay u noqoneysaa farxad qofka oo aan lagu qiimeyn karin waxyaabo qaali ah.
6 – U diyaari dareenkaaga waxa fiican:
Ha noqon qof dhinaca xun wax ka fiiriya, kana dheerow kuwo dhinaca xun wax ka fiiriya, isku day inaadan dabagalin baraha bulshada wararka xun faafiya, yeynan ku saameyn mowqifyada iyo dabeecadaha iyo ra’yiga xun ee dadka kale, raadso asxaab wanaagsan, akhri sheekooyinka ku saabsan dadka dareenka wanaagsan gudbiya.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad fadlan si xor ah u weydiiso, hana iska weyneyn weydiisashadeeda, ogow codsiga kaalmada waxay ka tarjumeysaa isdhex galka quruxda badan ee kalsonida nafsadaada iyo is hoosaysiinta ama التواضع.